ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာမစားသင့်ကျန်းမာရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လုပျနိုငျအရေးကြီးဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ. Most newcomers come from countries where people eatalot of fruits, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အခြားကျန်းမာသောအစားအစာများ.
One of the most important things you can do is to find the supermarkets nearby to your home. အချိန်အများစုမှာ, ကြီးမားသောစတိုးဆိုင်အသေးစတိုးဆိုင်များထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လိမ့်မည်. Supermarkets are big and carryavariety of foods from around the world at reasonable prices. Other newcomers in your community may have suggestions of supermarkets and other stores where you can find low-cost healthy food and foods from your country.
အတော်များများကစူပါမားကက်ကူပွန်များ, which are vouchers that lower the cost of certain grocery items. ကူပွန်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ထားကြပါတယ်, သတင်းစာများအတွက်, နှင့်မေးလ်မှတဆင့်. Supermarkets also post discounted items on their websites and in booklets available in-store. Consider buying different brands of the same foods as coupons change from week to week.
သင့်ရဲ့စူပါမားကတ်တစ်ဦး "ကလပ်ကဒ်ရှိစေခြင်းငှါ,"သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်ကဒ်, သင်တို့ကိုအထူးလျှော့စျေးမှ access ကိုပေးသည်. သူတို့အတန်းမှာနှင့်စင်ပေါ်အတွက်အထူးလျှော့စျေးကိုပြသ. ငွေစုဘို့သင့်စူပါမားကတ်ရှိပါတယ်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဖို့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကောင်တာသို့သွားရောက်.
Store ကိုအမှတ်တံဆိပ်ကိုမကြာခဏကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်အမည်များထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း. စတိုးဆိုင်အမှတ်တံဆိပ်သင့်ရဲ့စူပါမားကတ်မှာရွှေ့ဆိုင်းထားရာမှထွက်ပုံ. သူတို့ကနိမ့်စင်ပေါ်အပေါ်များသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်, နာမကိုအမှီအမှတ်တံဆိပ်မျက်စိအဆင့်မှာရွှေ့ဆိုင်းနေစဉ်.
စျေးဝယ်တဲ့အခါမှာတစ်ယူနစ်ဈေးနှုန်းများအောက်မေ့ Be. တစ်ဦးကယူနစ်စျေးနှုန်းအတိအကျအရေအတွက်၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည် (အောင်စနှုန်း, ပေါင်ချိန်, လီတာ, စသည်တို့ကို) ထုတ်ကုန်၏. ဥပမာ, သငျသညျသီးနှံတစ်ဦးဂျမ်ဘိုအရွယ်သေတ္တာကိုအကောင်းဆုံးသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်ထင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့သေတ္တာပေါ်ယူနစ်စျေးနှုန်းလျော့နည်းစေခြင်းငှါ. ထိုကိစ္စတွင်, it would be to your advantage to buy two smaller boxes instead of one big box! Unit prices are usually shown just below the selling price.
Out-of ရာသီအသီးအနှံယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးစျေးကြီးသည်, ဒါကြောင့်ရာသီ၌နေသောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဝယ်ခြင်းဖို့ကြိုးစား. အဆိုပါပူနွေးလအတွင်း, plantingasmall garden at your home or inacommunity plot can be an inexpensive source of vegetables for your family.
ပဲ, နံ့သာမျိုးနှင့်အခြားအခြောက်အစားအစာများအမြောက်အများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း. အမြောက်အများပမာဏဝယ်ယူရေရှည်ကျော် expense သငျသညျကိုကယျတငျနိုငျ, ဒါပေမယ့်ဒါသတိအချို့သောအစားအစာများကိုအလျင်အမြန်ဖျက်ဆီးသောကွောငျ့ပြုပါ. ပျက်စီးကြောင်းအစားအသောက်နည်းလမ်းပိုက်ဆံဖြုန်း.
Avoid convenience stores for large amounts of shopping. သူတို့နာအကြံပြုအဖြစ်, စတိုးဆိုင်များမှအဆင်ပြေများမှာ. They are common in urban neighborhoods and are open late or even all night. But their goods are often overpriced, and they don’t stock many healthy foods. Convenience stores are best visited for small grocery runs and urgent food needs only.
Some foods you are used to eating may be hard to find or expensive in the USA. ဘုံမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအသားနှင့်အသီးအပွ, ထိုကဲ့သို့သောသင်္ဘောသီးအဖြစ်, are expensive because they are imported. You can look for fruits that are similar and cheaper, or just buy your favorites for special occasion.
ကုန်စုံစတိုးဆိုင်၏အထူးကဏ္ဍများကိုသင်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြောင်းအချို့ပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်စေခြင်းငှါ. ဤရွေ့ကားကဏ္ဍများကိုများသောအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်, ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့မြို့ရွာတို့၌သင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုယဉ်ကျေးမှုများမှအစားအစာများကိုတစ်ဦးပိုမိုကြီးမားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူငယ်များစတိုးဆိုင်များကိုတွေ့လိမ့်မည်. You can search for these stores using FindHello or at Specialtygrocery.net.
ဒါဟာတာရှညျခံစားအစားအစာများကိုဝယ်ခြင်းငှါလည်းဖြစ်နိုင် (အလျင်အမြန်ဖျက်ဆီးမအစားအစာများ) အင်တာနက်ပေါ်မှာ. You will have to use your credit card or bank account to do this. It is convenient because the foods are delivered to your home. တိုင်းရင်းသားအစားအစာလက်လီအရောင်းဆိုင်အွန်လိုင်းတစ်ခုမှာသာဓကဖြစ်ပါသည် eFoodDepot.com.
USA တွင်, there are community food pantries and food banks that provide food to low-income people. သင်၌ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် FindHello for food assistance in your community. You can also visiting Feeding America to see if you qualify for any of government food assistance programs or to find your local food bank.
အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေသားသမီးများထှနျးအလေ့အထများဆုံးမဩဝါဒပေးကအရေးကြီးတယ်. အတော်များများကအမေရိကန်ကလေးများဆင်းရဲသောသူသည်အစာအာဟာရ၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့၏အလေးချိန်နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်. သင်သည်သင်၏သားသမီးတို့သည်အိမ်မှာအာဟာရအစားအသောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ပထမဦးဆုံးယဉ်ကျေးမှုကနေအစားအစာ၏မာနထောင်လွှားဖြစ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
သူတို့ကလုပ်ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်ကလေးများများသောအားဖြင့်အိမ်မှာအစာကိုစားဖို့ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်. Take your children grocery shopping with you and ask them to help you make meals.
Eating meals together can help your family stay close and means you can make sure your children are eating nutritious food. အစာစားခြိနျမှာ, သင်သည်သင်၏ယဉ်ကျေးမှုကနေအစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရန်သို့မဟုတ်သင်အသစ်ဖြစ်ကြောင်းအစားအစာများကိုကြိုးစားကြဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ. အကျွမ်းတဝင်ဟင်းလျာများချက်ပြုတ်သင်သည်အစားအစာအစဉ်အလာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏အမြစ်များမှကပ်လျက်တည်ရှိနေရန်သင်၏သားသမီးအားပေးခွင့်ပြု. အသစ်ကအမေရိကန်အစားအစာများကြိုးစားနေသည့်အခါ, သင်သည်သင်၏သားတို့နှင့်အတူသစ်တစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုဝေမျှဖို့နဲ့အသစ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဘို့မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်မျှဝေဖို့အခွင့်အလမ်းများ.
Foods in the USA have labels on them that describe, အသေးစိတ်, အဘယ်အရာကိုပါဝင်ပစ္စည်းများအစားအစာများတွင်ဖြစ်ကြပြီးဘယ်လောက်ကသင်အစာစားရပါမည်. It’s good to learn how to read these labels because it allows you to find out ifafood has many calories and if it has vitamins and minerals that will benefit your health. သင်လုပ်နိုင်သည် learn more about these labels from the Food and Drug Administration.
ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွဖြစ်သင်၏သားသမီးအားပေးဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကလေးအတော်များများရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှု, ဗီဒီယိုဂိမ်းကစား, သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ဖုန်းများလွန်းကိုသုံးပါ. ညစာအပြီးမှာငါတို့သားသမီးနှင့်အတူအပြင်ဘက်ကစားခြင်း, နောက်ပိုင်းကျောင်းအားကစားအဘို့ထိုသူတို့တက်လက်မှတ်ထိုး, သူတို့ကိုအသုံးမည်မျှနည်းပညာစောင့်ကြည့်ဒီလိုလုပ်ဖို့အားလုံးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်.
အများစုမှာအမေရိကန်တွေ, မြို့ကြီးများတွင်နေထိုင်သောအထူးသဖြင့်သူတို့အား, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစာအာဟာရကြီးထွားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်မွေးမြူရေးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး (နွားတွေ, ဆိတ်များ, စသည်တို့ကို). သို့သော်, ကသင့်ရဲ့အစားအစာအချို့ကိုကြီးထွားဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. It isagreat way to make sure your family has healthy things to eat. You can buy seeds and materials for planting in home and garden stores.
သငျသညျမွို့တစျမွို့တှငျနထေိုငျအနည်းငယ်သာအာကာသရှိပါက, သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်သင့်လသာဆောင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ခွံထဲမှာအနည်းငယ်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကြီးထွားနိုင်ပါတယ်. သင်လုပ်နိုင်သည် joinacommunity garden.
သင်တစ်ဦးကြီးမားသောဥယျာဉ်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, ကျေးလက်ဒေသဧရိယာထဲမှာတစ်အိမ်မှာတွေ့ပါမှအကောင်းဆုံးက, ကအိမ်နောက်ဖေးသို့မဟုတ်နေရင်းပြည်၌ရှိသည်ဖို့စျေးနှုန်းချိုသာသည်အဘယ်မှာရှိ. အစားအစာကြီးထွားလာသင်သင့်အိမ်နိုင်ငံတွင်ခဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အချို့ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီစေခြင်းငှါ.